Iingcebiso zokucwangcisa iShedyuli yakho yokuPapasha kaYouTube-YTpals
I-YouTube iye yavela njengendlela enengeniso yokuthumela kunye nokwenza imali ngomxholo omninzi. Abadali bomxholo baye bamkela iqonga leendaba zoluntu njengendlela enamandla yokunxibelelana. Ukuqhuba isitishi seYouTube, nangona kunjalo, akuwona msebenzi mncinane. Abasebenzisi beYouTube kufuneka bakhuphe umxholo rhoqo ukutsala kunye nokugcina ababhalisile kwaye bahlale befanelekile. Ukucwangcisa inkqubo yokupapasha umxholo kuyafuneka.
Kwisicwangciso esiqinileyo somxholo weYouTube, kuyafuneka ukuba umisele ishedyuli yokupapasha. Abasebenzisi beYouTube bajonga umxholo oqhelekileyo, ke ukunamathela kwishedyuli kuya kuqhuba ukugcwala ngakumbi kwijelo lakho. Eyakho yasimahla Ababhalisile be-YouTube lindela ixabiso ngexesha abatyala ngalo kwitshaneli yakho. Ngazo zonke iindlela, unako bathenge ababhalisile kwiYouTube kwaye wongeze isitishi sakho, kodwa kuya kufuneka usebenze nzima ukugcina ababhalisile bakho bezinto eziphilayo. Ukungahambelani kuyakudanisa ababhalisile bakho kwaye kubenze balahlekelwe ngumdla.
Qinisekisa ukuba rhoqo
Okukhona rhoqo kwaye kungaguquguquki ukuthumela kwakho, inani elikhulu lokuthandwa kweYouTube kunye neembono oya kuzifumana. Gcina engqondweni, unako kwakhona thenga ukuthanda kweYouTube ukusuka kwiYTpals.com. Ngapha koko, kuya kufuneka ube nombono ocacileyo malunga nokuba unqwenela kangakanani ukupapasha umxholo kunye nokuzibandakanya nabaphulaphuli bakho. Nje ukuba wenze isigqibo malunga nokuphindaphindwa kokulayisha, fika kwiintsuku ezithile ezifanele ukupapasha umxholo omtsha ngokusekwe kukhetho lwakho kunye nokulula kwakho. Kuya kufuneka uthathele ingqalelo lula kombukeli. Umzekelo, abasebenzisi banokusebenza ngakumbi ngeempelaveki nangeeholide zikawonke-wonke.
Gqiba elona xesha lilungileyo
Kuyacetyiswa ukuba ulungise elona xesha lifanelekileyo lokubeka iividiyo zakho. Elona xesha lilungileyo linokuxhomekeka kuncedo lwakho okanye kuhlalutyo lukaYouTube. Vavanya iincopho zeeyure zokujonga ngokusekwe kubaphulaphuli ojolise kubo. Qinisekisa ukuba uthumela umxholo wakho kwiiyure ezimbalwa ngaphambi kwexesha elimisiweyo ukuze i-YouTube ibonise ukulayisha kwakho kwaye ikhuphe iziphumo zokukhangela.
Nxibelelana nabaphulaphuli bakho
Yazisa ababukeli bakho ngeshedyuli yakho yokupapasha ngebhokisi yenkcazo engezantsi kwevidiyo nganye, okanye uphindaphinde ishedyuli yakho kwividiyo nganye. Sebenzisa iYouTube Live ukunxibelelana ngcono nabaphulaphuli bakho kwaye wandise ukufikelela kwakho.
Hlaziya ikhalenda yomxholo wakho
Yenza kwaye uhlaziye ikhalenda yakho yomxholo usebenzisa isicwangciso okanye itemplate. Bhala phantsi yonke imihla ebalulekileyo kunye neziganeko ofuna ukuzijolisa kwikhalenda yakho kwaye ucwangcise umxholo wakho kwangaphambili. Ukuba ufuna ukwenza ividiyo yoSuku lwaBasetyhini, kufuneka umaka umhla kwikhalenda yakho kwaye wenze isigqibo ngowona mxholo ufanelekileyo.
Khetha umxholo oza kuwufaka
Yiza nezihloko ezinomdla kubaphulaphuli ojolise kubo. Kuba ujonge ukwenza umxholo oqhelekileyo, i-gamut yezihloko kunye neesubtopics ziya kufuneka kwifilimu kaYouTube. Unokusebenzisa iimetriki zikaYouTube ukubona ukuba zeziphi iividiyo ezisetyenziswa ngababukeli. Unokufikelela kubabhalisi bakho kwaye uqhube iivoti ukwenza isigqibo malunga nokuba abantu abaninzi bafuna ukubukela ntoni. Xa liphezulu ixesha lokubukela, kokukhona unokwenza imali ngetshaneli yakho ngokukhawuleza. Sincoma ukuba uthenge iimbono zeYouTube kwaye thenga iiyure zokubukela zikaYouTube ukuqalisa ukuba awukwazi ukwenza iimbono zasimahla zikaYouTube.
Cwangcisa iiposti zakho
Yenza iividiyo zakho zeYouTube kwangethuba kwaye uzicwangcisele umhla kunye nexesha elimiselweyo. Layisha kwangaphambili iividiyo kwaye uthintele nakuphi na ukuphela. Ukulayisha kwangaphambili kukuvumela ukuba usebenze ngokucwangcisiweyo, kukuvumela ukuba upapashe izithuba zakho ngelona xesha lifanelekileyo kwaye uhlale ungenaxinzelelo. Ukucwangcisa iividiyo zakho kuya kongela ixesha kwaye kuya kukuvumela ukuba ugxile ekudaleni umxholo omtsha wokulayisha kwixesha elizayo.
Yazisa iividiyo zakho ezizayo
Ikhalenda yakho yomxholo kufuneka ibandakanye isicwangciso sokwazisa umxholo oceba ukuwulayisha kwixa elizayo. Unokuba nobuchule kwaye unike iinkcazo zomlomo okanye iziqwengana ezimfutshane zeevidiyo zakho ezizayo ngeevidiyo zakho zeYouTube. Unokusebenzisa amanye amaqonga eendaba ezentlalo, anje nge-Instagram kunye ne-Twitter ukukhuthaza iividiyo zakho ezizayo zeYouTube.
Ukucwangcisa ishedyuli yakho yokupapasha kuYouTube linyathelo elibalulekileyo lokukhulisa ijelo lakho likaYouTube. Ukuba awuqinisekanga malunga nokuba ungazifumana njani ngakumbi izinto ezithandwa nguYouTube kunye nababhalisile, iinkampani ezinjengeYTpals zinokukuhlangula. Banobuchule bokukufundisa kwaye bancede ukukhulisa ukuzibandakanya kwakho kuYouTube. Kwaye, ngazo, unokuthenga izinto ezithandwa nguYouTube kunye nokuba thenga izabelo zikaYouTube ngokunjalo. Oku kuya kunceda ukonyusa izinga lakho kwi-algorithm yeYouTube. Ukuba u Thenga izimvo zikaYouTube, iyakwandisa ukuthembeka kwevidiyo yakho.
Iingcebiso zokucwangcisa iShedyuli yakho yokuPapasha kaYouTube ngababhali beYTpals, 5 May 2022
Iindlela ezikhawulezayo zokufumana amagama angundoqo eVidiyo ukuze uphucule i-SEO yeYouTube
IYouTube yenye yezona nethiwekhi zidumileyo zeendaba zoluntu kunye neqonga elikhokelayo lokusasaza ividiyo kwihlabathi liphela. Ngabasebenzisi abamalunga ne-2.29 yeebhiliyoni ezisebenzayo ngenyanga, iYouTube liqonga leendaba lesibini elidumileyo emva…
Uyisebenzisa kanjani iYouTube kwintengiso yeFluencer ukuze ufumane iZiphumo zoNene?
Xa sithetha ngentengiso yempembelelo, I-Instagram mhlawumbi yinethiwekhi yokuqala yemithombo yeendaba eza kuthi ithi qatha ezingqondweni zethu. Kodwa ubusazi ukuba ividiyo ekwabelwana ngayo ngevidiyo iYouTube ayilibali? Ngapha koko, ibinye…